Igbo, John: Lesson 076 - Jizọs tere mmanụ na Betani (Jọn 11:55 - 12:8) | Waters of Life
Search in "Igbo":
Home – Igbo – John - 076 (Jesus anointed in Bethany)
JỌN - IHE NDI NA-ENYE IHE‘N'ỤLỌ NCHE
Ihe omumu nke ozioma nke Kraist dika Jọn
NKEBI NKE 3 - IHE NA-ENWU NA GBURUGBURU NDIOZI (Jọn 11:55 - 17:26)
A - NA - EME KA OGE IZU IKE (Jọn 11:55 - 12:50)
1. Jizọs tere mmanụ na Betani (Jọn 11:55 - 12:8)
55 Ma ememe ngabiga nke ndi-Ju di nso. Ọtụtụ ndị si n'obodo ahụ gbagoo Jerusalem tupu Ememe Ngabiga, iji mee onwe ha ka ha dị ọcha. 56 Ya mere ha nāchọ Jisus, ha nēkwurita kwa n'etiti onwe-ha, mb͕e ha guzoro n'ulo uku Chineke, si, Gini ka unu nēchè na ọ dighi-abia n'ememe a? 57 Ma ndi-isi-nchu-àjà na ndi-Farisi nyere iwu na ọ buru na onye ọ bula mara ebe Ọ nọ, ọ ghaghi igosi ya, ka ha we jide Ya.
Ememe Ngabiga bụ oriri bụ isi n'Agba Ochie, na-eme ka ndị Hibru zọpụta ndị mmadụ site na iwe Chineke na Egypt. Site na nke a, ha biri n'okpuru nchebe nke Nwa-atụrụ Chineke nke edoziri maka ha. Ha kwesiri ịnwụ, ma okwukwe zọpụtara ha.
Kwa afọ, ndị Juu ga-aga Jerusalem iji kelee Chineke maka ichebe ha pụọ n'iwe ya. N'ebe ahụ ka ha gburu ọtụtụ puku ụmụ atụrụ ma rie ha. Otutu mmad na aga Jerusalem n'oge gara aga iji mee ka ha di ọcha site ná nchèghari, di njikere idi n'otù na nwa atr nke Chineke, na ha gaani n'oge ememe Ngabiga ah. Ọ bụrụ na onye ọbụla emetụ ozu aka, ọ ghaghị idebe usoro nchacha nke ụbọchị asaa iji banye n'ụlọ nsọ Chineke (Ọnụ Ọgụgụ 19:11).
N'oge a ndị pilgrim jụrụ banyere Jizọs onye Nazaret, "Ọ ga-abịa ma ọ bụ na ha agaghị ahụ ya?" A sị ka e kwuwe, ha maara na Chọọchị okpukpe kpebiri na ya ga-ama ya ikpe ọnwụ. Ha gwara ọtụtụ n'ime mba ahụ ka ha nyochaa Jizọs ma gwa ha ma ọ bụrụ na ha ahụla ya ebe ọ bụla, iji jide ya. Ụkwụ ọnwụ bụ oghe iji loda Jizọs.
1 Mb͕e ubọchi isi fọduru n'iru ememe ngabiga, Jisus biaruru Betani, ebe Lazarọs nọ, Onye O mere ka O si na ndi nwuru anwu bilie. 2 Ha wee mee ya nri abalị n'ebe ahụ. Mata na-eje ozi, ma Lazarọs bụ otu n'ime ndị nọdụrụ na tebụl ya. 3.Ya mere, Meri were otù ogbe mmanụ nke nard di ọcha, nke di oké ọnu-ahia, o we te ukwu Jizos manu, were kwa agiri-isi-ya hicha ukwu-ya. Ụlọ ahụ jupụtara na ísì ụtọ nke mmanu mmanu ahụ.
Jizọs atụghị egwu iji aghụghọ nke ndị iro ya ma nọgide na-aga Jerusalem dị ka uche Nna ya si dị. Ọ chọghị nchịkọta, kama ọ laghachiri Jerusalem otu izu tupu ememe ahụ. Ọ gafere Betani, kilomita atọ site na Isi Obodo. Ọ bịara n'ụlọ ebe o gosipụtara ike ya ma kwanyere Nna ya otuto site n'ịnagide ọnwụ. Lazarọs nọ na-eri, na-aṅụ ma na-aga ahịa. Ndị mmadụ hụrụ ya, ibobo na-atụkwa ya anya na ọ ga-anwụ ọnwụ ma hụ ihe ọhụụ.
Meri, Mata na Lazarọs enwetawo otuto Chineke ma gbaa àmà banyere ya, n'agbanyeghị na egwu ndị Council. Ọ nabatara Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya ma nye ya oriri na nnukwu ọṅụ. Lazarọs bụ enyi Jizọs, o wee nọdụ n'akụkụ Onye ahụ kpọlitere ya n'ọnwụ. Ọ bụ na foto a adịghị agwa anyị ihe banyere Paradaịs? Chineke agaghi n'ebe di anya, ma anyi gaano gaadi na ya n'ebube.Mata, onye na-elekọta ụlọ, meghere akụ nke ụlọ ya, na-enye ihe ọ maara na Jizọs bụ ezi Mesaịa ahụ, merie ọnwụ.
Mari, ihe omimi, na-asọpụrụ Jizọs n'ụzọ nke ya, na-eweta karama nke ihe ísì ụtọ dị oké ọnụ ahịa na-akwụ ụgwọ ihe dị ka ụgwọ otu afọ nke onye ọrụ. Ọ gụsiri ya agụụ ike inye Jizọs ihe ọ kachasị mma. Ma o chere na ya erughi eru iji tee isi ya kama o jiri ihe onwunwe nke ndụ ya tee ụkwụ ya. Ịhụnanya abụghị ihe dị mkpa kama ịchụ àjà n'àjà.
N'ikpeazụ, o ji ntutu ya hichaa ụkwụ ya. Omume ịhụnanya a, nke nwere obi eziokwu na nke dị nsọ, jupụtara ísì ụtọ zuru ebe obibi ahụ. Ndị niile nọ n'ebe ahụ jupụtara ísìsì nke àjà Meri.
4 Judas Iskarịọt, nwa Saịmọn, bụ otu n'ime ndị na-eso ụzọ ya, bụ onye ga-arara ya nye, wee sị: 5"Gịnị mere e ji ree mmanụ a na narị mkpụrụ ego dinarịọs atọ ma were ya nye ndị ogbenye?" 6 lekọta ndị ogbenye, ma n'ihi na ọ bụ onye ohi, na ịnweta igbe ego, na-eji ohi ihe etinye n'ime ya.
Judas hụrụ ego karịa na ọ hụrụ Jizọs n'anya, na-ahọrọ ihe ọmụma ahụ n'ezi okwukwe. Ya mere, o choro ịkọwa àjà ahụ maka ego, ileghara ngọzi ime mmụọ anya na ya. O kwenyeghi n'echiche Meri na-asọpụrụ, ekele na ịrara onwe ya nye Kraịst. Onye hụrụ ego n'anya na-aghọ ekwensu. N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ zoro ezo maka ịkpọasị Jizọs, dị ka à ga - asị na ọ zubere ọrụ ebere iji kwado ndị ogbenye. Ọ naghị eche maka ha, ma ọ bụ chọọ inye ha ihe ọ bụla, kama ọ chọrọ inweta ego ahụ n'onwe ya. Obiọma maka ya bụ ihe mkpuchi maka ịkwa ohi, na-etinyekwu n'akpa ya karịa ka o nyere ndị ogbenye; ndi kwesiri ntukwasi obi n'ihe ntà, ma onye ohi n'ebum n'uche na iche echiche.
Jizọs atụleghị ihe ndekọ ọ bụla banyere onye na-echekwa ego a, ma soro ya ruo na njedebe ọ bụ ezie na ọ maara banyere aghụghọ ya na omume ọjọọ ya. Judas bụ onye na-apụnara mmadụ ihe na onye na-agba ọsọ, na-ahụ onwe ya n'anya na akụ na ụba nke akụ na ụba, na ohu ya. Nwanna, ị pụghị ijere Chineke ozi na ego. Ị ga-ahụ onye ahụ n'anya ma kpọọ onye nke ọzọ asị. Emegbula onwe gi. Chineke bu ihe mgbaru ọsọ gi ma obu bu ndu nke udo?
7. Ma Jizos siri, Rapu ya. O debere nke a maka ụbọchị olili m. 8 N'ihi na unu nwere ndi-ob͕eye mb͕e nile, ma unu anọghi mb͕e nile.
Chineke adịghị agwa anyị ka anyị na-emebiga ihe ókè, na-awụsa mmanụ na-esi ísì ụtọ n'ụkwụ nke ụkwụ ma na-emeghe anya anyị maka mkpa ndị ogbenye nọ anyị gburugburu. Ọ dịghị otu, okpukpe ma ọ bụ nkwenkwe nwere ike ihichapụ okwu Kraịst na ndị ogbenye ga-anọnyere anyị mgbe niile. Ihe ịchọ ọdịmma onwe onye nanị dị njọ, ịhụnanya anyị dị obere. Enweghi ike inwe mmekorita nke ime uwa n'elu uwa; ọ bụghị mmadụ nile ga-eso n'òtù na ndị ọzọ niile na onyinye na akụ na ụba ma ọ bụ nsọpụrụ. Anyị ga-ahụ ndị ọjọọ, ndị jụrụ na ndị dịpụrụ adịpụ n'ebe ọ bụla anyị na-aga, n'ebe ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ n'ebe ọdịda anyanwụ. N'obodo ma ọ bụ n'obodo nta ọ bụla, chọọ ndị ogbenye na n'ime ha ị ga-ahụ ihu Jizọs.
Jizọs maara na obi mmadụ dị ike dị ka nkume na nkume oyi. Ọ bịawo na ịhụnanya nke ịhụnanya ịnwụ maka ha. Ọ makwaara na Mmụọ Nsọ mere ka Meri kpoo ụkwụ ya ma tee ya mmanụ maka olili. Mgbe ịhụnanya Chineke na-abanye ndị mmadụ, Mmụọ Nsọ ga-eduzi inweta ihe ịtụnanya a na-atụghị anya ha. Meri choro inye onye isi Chineke otuto, ya mere Mo Nso duru ya ka o tee ya mmanụ. Kraist nmalite ime ka udo nke uwa a di nma na Chineke nke idi nma na amara.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị hụrụ gị n'anya maka ịkpọlite Lazarus. Ị tụghị ụjọ maka ili ahụ. Kụziere anyị ka anyị nye anyị obi na ihe onwunwe iji jeere gị ozi na ihe niile anyị nwere. Naputa anyi site na mmadu, ihu abua, izu ohi na ikpo. Jupụta anyị n'ịhụnanya gị, ma duga anyị n'ụzọ ịchụ àjà na ekele.
Gịnị mere Jizọs ji were mmanụ e tere mmanụ?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:26 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)